Diyaaradaha for duulaya xad-dhaaf ah. Sukhoi Su-31, tegi kartaa si degdeg ah, waxaa loogu tala galay dibad iyo tababar. Digniin: diyaaradaha waxay u baahan tahay tijaabo ah oo aad u xirfad leh! Habka aad u wanaagsan la sameeyey. Gudaha waa mid aad u xishoonaayo. Diyaaradaha loogu tala galay in la sameeyo Air Show for exemple on kulan multipayers.
The Sukhoi Su-31 waa diyaarad a Ruush-hal engined aerobatic loogu talagalay by Sukhoi sida a Sukhoi Su-29 fududee iyo awood badan.